October 8, 2021 - ApannPyay Media
ဘေးဘက်ကအဆီပိုတွေ သိသိသာသာ လျော့ကျသွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း ၅ ခု
October 9, 2021 October 8, 2021 by ApannPyay Media
ဘေးဘက်ကအဆီပိုတွေ သိသိသာသာ လျော့ကျသွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း ၅ ခု ဘေးဘက်မှာ အဆီပိုတွေထွက်နေရင် အဝတ်အစားအကျပ်တွေဝတ်တဲ့အခါ အဆီရှိနေတာ သိသာစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂျိုင်းအောက်ဘက်၊ ခါးဘေးနဲ့ ဝမ်းဗိုက်နေရာတွေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဘေးဘက်ကအဆီပိုတွေ သိသိသာသာလျော့ကျသွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း ၅ ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ယောဂဖျာပေါ်လှဲပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ခြေထောက်နဲ့လက်ကို ဆန့်ထုတ်ပြီး မြှောက်ထားပေးရပါမယ်။ မြှောက်ပြီးရင် ပြန်ချပါ။ ပြီးရင် ပြန်မြှောက်ပါ။ အဲ့အတိုင်း အကြိမ် ၂၀ လုပ်ရပါမယ်။ ပြည့်သွားရင် နောက်ထပ် ၂ ကျော့ ထပ်လုပ်ပေးပါ။ စုစုပေါင်း အကြိမ်အရေအတွက် ၆၀ ဖြစ်ရပါမယ်။ ယောဂဖျာပေါ်မှာ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ခြေထောက်ကိုကွေးပြီးမြှောက်ကာ လက်နဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားပေးပါ။ အဲ့အနေအထားနဲ့ စက္ကန့် ၆၀ နေပေးရပါမယ်။ စက္ကန့် ၆၀ … Read more
ခြေထောက်လေးတွေ လှနေဖို့ ခြေထောက် SPA ပြုလုပ်နည်း
October 8, 2021 by ApannPyay Media
ခြေထောက်လေးတွေ လှနေဖို့ ခြေထောက် SPA ပြုလုပ်နည်း My Ladies တို့ရေ.. မျက်နှာ‌လေးကိုပဲ Care နေကြပြီး ခြေထောက်လေးတွေကိုလဲ Care လုပ်ဖို့ မေ့နေလို့ မ‌ဖြစ်ဘူးနော်ခြေထောက်လေးတွေလှနေဖို့ဆိုတာကလည်း သေချာလေး Spa လုပ်ပေးမှ ဖြစ်မှာပေါ့ ပိုက်ဆံလဲ ၅၀၀ လောက်ပဲ ကုန်မယ်။ အိမ်မှာပဲ လုပ်ရတာ ဆိုတော့အချိန်လဲ သိပ်မကုန် ဘူး။ ပြီးတော့ Result ကလဲ Amazing ဆိုတော့ အရမ်း မိုက်တယ် ဟုတ် သားသား မီးမီး တို့ ခြေထောက်လေးတွေလဲ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အိမ်က အချစ်ကြီးကိုလဲ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ (သဘောတွေကျပြီး မုန့်ဖိုးတွေ ၊ လက်ဆောင်တွေ ၊ အာဘွားတွေ ဒလဟော လာပါလိမ့်မယ်) ကျွန်မ … Read more
ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ပြန်လွှတ်ပေးသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောလာတဲ့ ခင်သဇင် မင်္ဂလာပါ ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ခင်သဇင်ကတော့ လေယာဉ်မယ် တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး လေယာဉ်မယ်ကနေမှတဆင့် အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာသူပါ။ သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာလည်း ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သလို ပညာရေး မှာလည်း ထူးချွန်တဲ့ဘွဲ့တွေ ရရှိထားသူတစ်ဦးပါ။ အင်တာဗျူးတိုင်းမှာလည်း ပွင့်လင်းဖော်ရွေစွာ ဖြေကြားတတ်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်လို့လည်း ဆိုရမှာပါ။ ခင်သဇင်ကတော့ အမြဲတမ်း အေးဆေးနေတတ်ကာ ကိုယ်ခန္ဓာလှပဖို့အတွက် workout ကို အမြဲဂရုတစိုက် လုပ်လေ့ရှိပြီး ပရဟိတတွေကိုလည်း အမြဲလုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးပါ။ ပရဟိတတွေလုပ်လွန်းလို့ တချို့ကတောင် ပရဟိတမင်းသမီးလေး လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတာပါ။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းလွန်းတဲ့သူလို့လည်း ပရိသတ်တွေက သိရှိထားပါသေးတယ်။ လက်ရှိ အ.ာဏ.ာသိ.မ်.းမှုအပေါ် မှာလည်း သူမဟာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ လက်ရှိမှာလည်း အ.ာဏ.ာသိ.မ်.းစစ်ကောင်စီဘက်က … Read more
ဆံပင်ကောက်ထားသူတွေ CURL CREAM ဝယ်စရာမလိုဘဲ ရှားစောင်းလတ်ပတ်နဲ့အကောက်ထိန်းနည်း
ဆံပင်ကောက်ထားသူတွေ CURL CREAM ဝယ်စရာမလိုဘဲ ရှားစောင်းလတ်ပတ်နဲ့အကောက်ထိန်းနည်း ဆံပင်ကောက်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေက နန်းဆန်သလို အရမ်းလှပါတယ်။ ဆံသားလေးက ကျန်းမာပြီး ကောက်သားလေးလှတာက ကြည့်ရတာလှလွန်းပါတယ်။ ဆံပင်ကောက်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာ လှပေမယ့် အကုန်အကျလည်း များပါတယ်။ ဆံပင်ကောက်ထားလို့ အကောက်ထိန်းဖို့ Curl Cream တွေဝယ်ရတယ်။ ကောက်ထားရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ ဆံပင်အကောက်ထိန်းဆေးတွေမှာ အယ်လ် ကိုဟောနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ အကောက်ထိန်းနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အကုန်အကျသက်သာတဲ့အပြင် ဆံပင်ပျက်စီးသက်သာစေပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ ရှားစောင်းလတ်ပတ် ၂ ဇွန်း အုန်းဆီ ၂ ဇွန်း Shea Butter ၂ ဇွန်း ရှားစောင်းလတ်ပတ်က ဆံသားကို အစိုဓာတ်ပေးပါတယ်။ ဆံသားပျက်စီးတာကိုလည်း ပြန်ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။အုန်းဆီက ခြောက်သွေ့တဲ့ဆံပင်ကို ပြန်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အဆိပ်ထုတ်ပေးပါတယ်။Shea Butter … Read more
ရက်စက်လိုက်ကြတာနော် ကိုရဲတိုက် သနားပါတယ်.
ရက်စက်လိုက်ကြတာနော် ကိုရဲတိုက် သနားပါတယ်. ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်တော့ပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီးဆန္ဒပြရာမှာကာကွယ်ပေးတဲ့ဒိုင်းအဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကိုမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်အားရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၇ရက်)ကရုံးထုတ်ခဲ့ကြောင်းရှေ့နေဦးခင်မောင်မြင့်ထံမှသိရသည်။ရှေ့နေဦးခင်မောင်ကကိုရဲတိုက်ကဒီနေ့အမှုကမရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာတရားစွဲထားတဲ့မူးယစ်စိတ်ပြောင်းပေါ့နော်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုေြ ပာင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ၁၆(ဂ)အမှုကိုရုံးထုတ်တာပါ။ဒီနေ့ကတော့ မစစ်သေးဘူး။ အရင်လိုပဲ CMP မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစည်းအဝေးပဲလုပ်ပါတယ်ဟု ၎င်းကဆို သည်။ ထို့ပြင် သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကိုနိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅ (က)ဖြင့် လသာမြို့နယ်ရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်ထားပြီး ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၄ ရက်က ရုံးထုတ်ခဲ့သည်။ ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်တော့ပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီးဆန္ဒပြရာမှာကာကွယ်ပေးတဲ့ဒိုင်းအဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကိုမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်အားရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၇ရက်)ကရုံးထုတ်ခဲ့ကြောင်းရှေ့နေဦးခင်မောင်မြင့်ထံမှသိရသည်။ရှေ့နေဦးခင်မောင်ကကိုရဲတိုက်ကဒီနေ့အမှုကမရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာတရားစွဲထားတဲ့မူးယစ်စိတ်ပြောင်းပေါ့နော်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုေြ ပာင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ၁၆(ဂ)အမှုကိုရုံးထုတ်တာပါ။ဒီနေ့ကတော့ မစစ်သေးဘူး။ အရင်လိုပဲ CMP မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစည်းအဝေးပဲလုပ်ပါတယ်ဟု ၎င်းကဆို သည်။ ထို့ပြင် သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကိုနိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅ (က)ဖြင့် လသာမြို့နယ်ရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်ထားပြီး ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၄ ရက်က ရုံးထုတ်ခဲ့သည်။ … Read more
ပိုက်ဆံကသခင်ရှိတယ် ၊ပိုက်ဆံမှာ ကျိန်စာရှိတယ် ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတိမတည်တတ်တဲ့သူတွေ ကြီးပွားချမ်းသာနေတာ တခါမှမတွေ့ဖူးသေးဘူး Money mind-set ပိုက်ဆံ ကသခင်ရှိတယ် ၊ပိုက်ဆံမှာကျိန်စာရှိတယ် ပိုက်ဆံကိုချေးရင်ပြန်ဆပ်ပါ…။ ပိုက်ဆံ ကိုပေးမယ်ပြောပြီးကတိတည်တည်ပြန်ပေးပါ…။ အခက်အခဲဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ် မခက်ခဲဖူးဆိုတဲ့လူမရှိပါဘူး အနည်းနဲ့ အများရှိကြတာပဲ…။ ပိုက်ဆံ ကို ကတိပျက်အောင် လုပ်ရင် သင့်ဆီမှာ ပိုက်ဆံဘယ်တော့မှတည် မြဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး…။ ကတိတည်တည်နဲ့ပေးစရာရှိပေး ယူစရာရှိယူပါ…။ လက်ခက်ရင်ငွေပါခက်တယ်…။ ကတိမတည်သူက ဘယ်တော့မှမတိုးတက်ပါဘူး…။ ပိုက်ဆံကို ပြန်မဆပ်ချင်တဲ့ သူတွေဆီမှာငွေလဲ မမြဲပါဘူး…။ လက်ခက်သူတွေ ဘာလုပ်လုပ်မအောင်မြင်ပါ…။ Crd ပိုက္ဆံကသခင္ရွိတယ္ ၊ပိုက္ဆံမွာ က်ိန္စာရွိတယ္ ေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးကတိမတည္တတ္တဲ့သူေတြ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနတာ တခါမွမေတြ႕ဖူးေသးဘူး Money mind-set ပိုက္ဆံ ကသခင္ရွိတယ္ ၊ပိုက္ဆံမွာက်ိန္စာရွိတယ္ ပိုက္ဆံကိုေခ်းရင္ျပန္ဆပ္ပါ…။ ပိုက္ဆံ ကိုေပးမယ္ေျပာၿပီးကတိတည္တည္ျပန္ေပးပါ…။ အခက္အခဲဆိုတာလူတိုင္းမွာရွိတယ္ မခက္ခဲဖူးဆိုတဲ့လူမရွိပါဘူး အနည္းနဲ႔ အမ်ားရွိၾကတာပဲ…။ … Read more
သတိထားပါ မိန်းကလေးတွေပိုသတိထားပါ ဒီနေ့ မောင်နှမ သုံးယောက်ပစ္စည်းသွားဝေပီး ကုန်ခါနီးမှာ အနောက်ကနေ ဦးလေး ကြီးတစ် ယောက် မဂျာပုခုံး ကိုလှမ်းပုတ်လိုက်တယ် ဘာတွေလဲ တဲ့ အဲတာနဲ့မဂျာက မျက်နာပေါင်းတင်တဲံဟာလို့မိန်းကလေးတွေကိုပဲ ပေးတယ် လို့ဆိုပီး လက်ထဲ၃ဗူးချန်တာကိုဆက်ပေးပီး ကားရှိတဲ့ ဘက် လမ်းလျောက်လာတာ ၅မိနစ် ၁၀မိနစ် လောက်ပဲကြာတာကားပေါ်ရောက်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးချွေးတွေ ပြန်လာတယ် ခေါင်းမူသလိုဖြစ် တော့ ထမင်းဆိုင်မောင်းလို့ ထမင်းစားရင်းဖျော်ရည်သောက်လိုက်မယ် ဆိုပီးဆိုင်ရောက်တော့လူကလက် တွေကလုံးဝအားပျော့ သွားတာ ဇွန်းကိုင်ဖို့တောင် အားမရှိတော့ ဘူး လူက အရုပ်ကျိုးပြတ်သလိုဖြစ် သွားတာ အဲ တာနဲ့ ကားပေါ်ပြေးတတ် အနွေးထည်ဘော်လီတွေ အကုန် ချွတ် ပီး မှေးသွားတာအိမ်ရောက်တော့ သံပရာရည် တွေ ဂရိတ်ဝေါတွေလိမ်း လူက လုံးဝပျော့ခွေသွားတာခန … Read more
လူမှု့ကွန်ယက်မှာ သူနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်‌မှု‌တွေမြင့်တက်နေတဲ့အပေါ် ဖြေရှင်းလာတဲ့ ဖိုးသောကြာ
လူမှု့ကွန်ယက်မှာ သူနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်‌မှု‌တွေမြင့်တက်နေတဲ့အပေါ် ဖြေရှင်းလာတဲ့ ဖိုးသောကြာ မင်္ဂလာပါ မြန်မာသံစဉ်တွေနဲ့တူတူပရိတ်သတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တာကတော့အဆိုတော်သုမောင်ရဲ့သား ဖိုးသောကြာပါ။မကြာခင်အချိန်ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတင်ခဲ့တာ post တစ်ခုကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတတာပါ။ ဒါကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသိပ်မသုံးတဲ့ ဖိုးသောကြာကတော့ သူရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေခုမှာ အောက်ပါစာအတိုင်းရှင်းပြခဲ့တာပါနော်။လူ့အလို နတ်မလိုက် ” လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်ကနတ်ကြီးဖြစ်နေပြန်ဦးမယ်။ အဲလိုပြောလို့လဲ မဖြစ်ပြန်ဘူး။ဒဲ့ပြောတာပဲကောင်းပါတယ်လေ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ကျနော်ရေးထားတဲ့ ပို့စ် တစ်ခုကိုကို ပြန်ရှယ်ပြီးကျတော်ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတယ်ဆိုတာကျနော့်မိတ်ဆွေစစ်တွေ၊ ပရိသတ်စစ်စစ်တွေက ပြောလို့ကျနော်သိရတယ်။နဂိုကတည်းကလည်း FB အသုံးနည်းတယ်။ FB က ကျနော့်ကမ္ဘာမဟုတ်ဘူး။ကျနော်ဝင်လည်းမကြည့်ဘူး။ရှင်းလည်းမရှင်းဘူး။ မရှင်းဘူးဆိုတာရှင်းစရာမလိုလို့မရှင်းဘူးဆိုတာ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ မရှင်းပဲနေတော့ ”အိပ်ပျော်နေတာလား၊ကြောက်နေတာလား၊ သေနေပြီလား ”မျိုးစုံပါပဲ။ ဟော ထရှင်းကြည့်လိုက်လေ ” အိပ်နေရာက နိုးလာပြီ၊မနေနိုင်လို့ထွက်လာပြီ ၊ ကြောက်လို့ထွက်ရှင်းပြီလို့ ” ပြောကြဦးမယ်။ ခုလည်းမရှင်းပဲနေနေတာပါ။ အမှန်ကိုသိတဲ့လူတွေကစာတွေပို့ပြီး ရှင်းပေးပါဆိုလို့ … Read more